Izindaba - Athuthuka kanjani amabhokisi okupakisha?
Ngokuthuthuka okusheshayo kwemboni yesimanje nokuthuthuka okuqhubekayo kwezinga lokuphila labantu, ukufunwa kwabantu emabhokisini okupakisha kuzoqhubeka nokwanda. Ngakho-ke, abathengi manje bahambisa phambili izidingo eziphakeme kwikhwalithi yamabhokisi okupakisha. Ngakho-ke kudinga ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha enqubweni yokukhiqiza, futhi ngokuqhubekayo kuthuthukiswe izinga lokuzenzekelayo leMishini. Kuphela lapho ukuzivumelanisa nezinguquko ezintsha nokuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi abahlukahlukene lapho amabhizinisi okupakisha amabhokisi angathuthukisa ukuncintisana kwawo.
Kumele ihlolwe yimakethe uma ufuna ukwazi ukuthi impahla ingathengiswa kahle yini noma cha. Ukupakisha kudlala indima ebaluleke kakhulu kuyo yonke inqubo yokumaketha. Ixhumana nabathengi ngesithombe sayo esihlukile, ibenze babe mnandi ezimpahleni lapho uqala ukuyibona. Njengoba umnotho wezimakethe ukhula eChina, abathengi abaningi baya ngokuya becabanga. Lokhu akugcini ngokwandisa ubunzima bokuthengiswa komkhiqizo, kepha futhi kwenza ukuklanywa kwamabhokisi okupakisha kuhlangane nenselelo engakaze ibonwe.
Ibhokisi lesipho sephepha
Ngokuthuthuka okuqhubekayo komnotho wezenhlalo, amandla athe ngcembe emakethe yanamuhla yezimboni nayo iholele ekwakhiweni kokupakishwa. Ufuna ukwenza imikhiqizo yakho ivelele esixukwini, ibhokisi lokupakisha liye laba ukhiye ongakhetha kukho. Abantu basebenzisa amagobolondo okupakisha ukuveza imizwa yabo, futhi ngokwenziwa ngcono kwamazinga wokuphila ngokwezinto ezibonakalayo nangokomoya, kunakwa kakhulu ukupakishwa komkhiqizo.
1. Khombisa ukufakwa okuyinhloko: ukufakwa kombono wokuqukethwe kungabonakala ngokufakwa kwangaphandle, okuya ngokuya kuthandwa kubathengi. Yize lo mphumela ungatholakala ngokuvulwa kwamakhadibhodi, abathengisi abaningi bomkhiqizo bakhetha ukufeza le nhloso ngokuhlanganiswa kokufaka-ukushumeka iwindi lepulasitiki esakhiweni sekhadibhodi. Amakhadibhodi kanye nepulasitiki kuzoba nenhlanganisela ephumelela kakhulu ngokuzayo.
2. Izinto ezifakiwe: Izinto ezenziwe ngombala sezithandwa kakhulu emaphaketheni ezimonyo. Ukuthungwa kuvame ukukhiqizwa ngamaphethini wokugcizelela ephepheni lonke. Lapho abantu beyithatha, bathola ukuthi idlulisa ukuthinta okwehlukile kunamakhadibhodi ajwayelekile noma abushelelezi. Yize umphumela wokugcina wokusebenzisa bushelelezi noma i-matte ungaphezulu, amakhasimende amaningi asathanda umphumela we-matte ohlanganiswe nezinto ezenziwe ngombala.
Ibhokisi Lephepha Eliphrintiwe
3. Iyabenyezela futhi iyakhazimula: Emabhokisini okupakisha ezimonyo. Ama-inki womphumela okhethekile, upende nezinto zensimbi ziyajoyina lo mkhuba. Abakhiqizi balwela ukuhlukanisa imikhiqizo yabo ngokusebenzisa le ndlela emisha, kodwa ngasikhathi sinye banake izindleko. Ngakho-ke, indlela yokufeza lokhu kubukeka nokonga izindleko ukusebenzisa uyinki wensimbi noma isicwebezelisi ekuphrinteni. Indima kawoyela weparele. Ngokuzayo, sizobona amabhokisi amahle kakhulu wokuhlobisa emakethe.
4. Isakhiwo sebhokisi esime ngendlela exakile: Izinkampani eziningi ziyadinga ukwakheka kwamabhokisi okupakisha ahlukile, okudinga izinguquko ezithile ezephula isiko esikhundleni sesimo esijwayelekile. Ushintsho olusha kule ndawo ukusetshenziswa kwamakhemikhali okuphela kwepulasitiki abunjiwe.
Ngokuthuthuka okusheshayo kwemboni yesimanje nokuthuthuka okuqhubekayo kwamazinga abantu okuphila, isidingo sabantu samabhokisi okupakisha sizoqhubeka nokukhula.